Bath Amathawula Amabha Omnyama 12 Inch
Ikhaya / izesekeli / Izinto Zokugeza / Bath ithawula Amabha Black 12 Inch
Isiphetho esibucayi siyivikela ekugqonyeni nasekugqwaleni endaweni emanzi yekhishi noma yokugezela futhi ithuthukise ukuqina.I-Both Towel Bars Black 12 Inch ayibonisi noma yiziphi izindawo futhi imelana nokuklwebheka, igcina ukubukeka kwayo okubushelelezi nokungenaphutha kalula ngokusebenzisa kwansuku zonke.
Le bha yethawula esezingeni eliphakeme le-Drywall Mounted Bath Hardware Accessory yenziwa nge-SUS 304 insimbi engagqwali futhi iqinile. Zonke izesekeli zivivinywa ngomthwalo omile wamakhilogremu angama-30. Ifanele izindawo ezinomswakama ezifana nezindlu zokugezela namakhishi. Leli thawula alinakusetshenziswa kuphela ezindlini zokugezela, emakhishini nasemagumbini okuwasha, kodwa futhi ungalifaka kunoma yiluphi uhlangothi lwekhabethe, elilungele ukubeka amathawula wesandla asetshenzisiwe noma amathawula wezitsha lapho ulisebenzisa ngokuzayo Ungalithola ngokushesha.
Ibha yethawula: ifanele amakhabethe okugezela, amakamelo okugeza, amathawula
Imininingwane: Ibanga lesikhungo: 305mm, ubude obuphelele 355mm
12 ″ imbotshana jam
SKU: 480109DB-12 Categories: izesekeli, Izinto Zokugeza Tags: iKhabhinethi, okwamanje